Mafomu Ekutungamira Akafa? | Martech Zone
Mhinduro pfupi? Hongu.
Zvirinani mune zvetsika pfungwa, uye ne "zvetsika" isu tinoreva kuda ruzivo rwevashanyi usati wapa kukosha, kana kushandisa stale, static zvemukati sekurudziro.
Ngatisimudzirei iro rori kune mamwe mamiriro:
Mubasa redu kubatsira vatengi kuwedzera kwavo online kutendeuka, isu takaona yakakosha, inowirirana kudonhedza muwebhu vashanyi vachizadza echinyakare lead mafomu. Pane chikonzero chakanaka cheizvozvo.
Maitiro emutengi ari kuchinja, kunyanya nekuti tekinoroji, ruzivo uye kubatana kunowanikwa kwavari kunoramba kuchichinja uye kugadzirisa maitiro avo.
Semagumo, vatengi vako vakura zvakanyanya kuziva, kunzwisisa, kuda, uye kutsauswa. Mune zvese, ivo vari zvachose unimpressed ne static zvemukati izvo zvinowanzopotsa mucherechedzo mukurovera zvavanoda, zvavanofarira, kana kwavari parwendo rwekutenga.
Gated zvemukati zvakashanda mushe kwete kare (tiri kukutarisa, machena mapepa uye ebook) izvozvi zvinotyisa zvinokurudzira kuwana yemumwe munhu ruzivo rwekuonana.
Kana iwe funga nezve webhusaiti yako se digital kutengesa rep (sezvaunofanirwa), zvimisikidzo zvemukati zvakasaswa nemafomu anotungamira zvakafanana kune mutengesi anotengesa nhaurirano, inonzwika senge rekodhi yakaputsika, uye anonunura toni imwechete-matsi kune chero tarisiro inodarika nzira yake. Enzanisa izvo nemutengesi anotengesa uyo anobvunza mibvunzo, anoteerera, uye anopa mhinduro dzinobatsira. Mumwe munhu anoyeukwa kwete seanoshusha mutengesi, asi semupi wezano anovimbwa uye akanaka kutaura. Ndo izvo zvinofambidzana zvemukati zvinogona kununura.
Kudyidzana kunoshanda here?
Funga izvi zvabuda.
Inopindirana zvemukati zvinogadzira 94% imwe shanduko mabviro
Inopindirana zvemukati zvinogadzira 300% yakakwira mutengi kusangana mabviro
Inopindirana zvemukati zvinogadzira 60% yepamusoro chengetedzo yeruzivo. mabviro
Inopindirana zvemukati zvinogadzira mazana mashanu muzana data rakatorwa. mabviro
Zvikonzero zviviri zvatinoda kunetsa:
Ruzivo rwakagadzirirwa zvandinofarira uye kwandinenge ndiri mukutenga zvichagara zvichirira, "bata-ese" zvemukati zvakagadzirwa kufadza munhu wese, kwese kwese. (Isu tese tinoziva kuyedza kufadza munhu wese kunoshanda. Hazviite.)
Neuroscientists vanotiudza edu "reptilian uropi"(Zita remadunhurirwa rekuti chikamu chehuropi chinotyaira maitiro asina chaanoziva uye wekupedzisira kutaura mune sarudzo) zvakanyanya zvekuona nemeso, uye zvemukati zvinoshaya zvinooneka zvinoshanda zvakanyanya.
Chidiki anecdote yekutsigira iyi yekupedzisira poindi: Isu takambove nemutengi bvunzo infographic inopokana nechena bepa, yega yega yakagara kuseri kwekutungamira fomu. Iyo chena bepa rakawana zero shanduko, nepo infographic yakakohwa 100% yekutumira. Unoda huropi hwehutachiona kutora matanho? Ita kuti zvemukati zviratidzike zvinomanikidza, nekuda kwaPete.
Iyo kesi yekurasa nzira yechinyakare yekushandura haisi yekuuraya mafomu zvachose, asi ku simbisa vatengi kutarisana nezviitiko zvinofambidzana izvo zvinovaka kuvimba uye kununura kukosha usati wavakumbira kuzvipira kukuru sekugovana ruzivo rwavo rwekuonana. (Kungofanana nekuzvibata mune zuva kana iwe uchitarisira kuwana wechipiri zuva.)
Ndeupi rudzi rwezvinhu zvinofambidzana zvinogona kuita izvozvo?
Mienzaniso ye zvinowirirana zvemukati dzinosanganisira:
Kugadzwa Mugadziri - Koka tarisiro yekuyedza-kutyaira maficha kana mabhenefiti nekumisikidza musangano
Miedzo - Zoom muzvido zvevanhu, uye tora mazano anobatsira
Calculators - Batsira vatengi kuona kukosha
tauriranai - 1: 1, chaiyo-nguva rubatsiro kungofanana nemutengi ari kuongorora kutenga
Tsika Nzira / Promos - Zvishandiso zvetsika, mazano kana promos zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, nhoroondo, kana kutenga kwevamwe
Instant Tarisa - Bvisa zvipingamupinyi zvekutenga nekujekesa kana vachigona kutenga izvozvi
pakarepo Win - Sanganisa zvinokurudzira nekuda kuziva
Inopindirana Infographics - Infographics ine zvinhu zvinofambidzana senge kufamba uye pane-zvinoda zvinhu senge info panes kana mavhidhiyo
Bhadhara ne tweet / yemagariro share - Reward vashanyi vane mukana kana ivo vachigovana zvemukati zvako nehukama hwavo hwemagariro
Quizzes - Rega vashanyi vaedze uye varatidze ruzivo rwavo
Nyaya Microsites - Online microsites inofamba mushanyi kuburikidza nemapeji uye mavhidhiyo kuburikidza nekushandurwa
tunyaya - Gutsa kuda kwavo uye uratidze kuti vanoziva zvakadii
Video - Ratidza vs. udza
Paunenge uchironga yako yekudyidzana zvemukati, zvinobatsira kuchengeta mundangariro vatyairi vepfungwa icho chiito chevashanyi chiito uye zvemukati zvinodyiwa. Pazasi isu tinonyora mashoma, akakweretwa kubva kushamwari dzedu pa Mafomu Ekutungamira Akafa:
Kuda iwe pachako
Zvichiri kusanzwisisika pane izvo izvi zvingaite kunge muchiito? Heano a gwara rinobatsira, iyo iwe yaunogona "kubhadhara netwitter" kuti iwe ugowana kuravira kweinopindirana inotungamira-gen nzira.
Tarisa uone iro Rekudyidzana Gwara
Tisati taparadzana nenzira, ini ndoda kubvuma uye kupa chaiyo yepamusoro-mishanu kune vatengi vedu uye inowirirana zvemukati vadyidzani-Muhammad Yasin naFelicia Savage kuPerQ. Chikwata chavo chakagadzira inonakidza, inofambidzana yemukati software yekushandura webhusaiti yako kuita mutengesi wedhijitari, iwe yaunofanirwa buda uye demo, Stat.
Kumbira Demo reInopindirana Zvemukati Software
Ndedzipi mhando dzezvinhu zvinofambidzana, kana zviripo, zvawakasangana nazvo? Ndeapi mafungiro ako kusvika parizvino? Goverana pazasi uye ngatibatsiranei kubuda.
kuburitsa: PERQ mutengi weedu boka.
Tags: Content Marketingzvinowirirana zvemukatiyekudyidzana zvemukati softwareinowirirana zvemukati mhandozviitiko zvekudyidzanalead mafomulead mafomu akafaPERQ
MaDhijitari Ekutungamira Ekutapa Ari Kuchinja